Kpop Idol တွေအမြဲသုံးတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ? | CosmeticMyanmar
Home » Article » Kpop Idol တွေအမြဲသုံးတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
Kpop Idol တွေအမြဲသုံးတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါက ကိုရီးယားက idol တွေရဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးခဲ့တာမှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာတော့ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်အမြဲလှနေတဲ့ idol တွေအမြဲသုံးတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
မက်မွန်သီးလေးလို့ ပရိတ်သတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ Sulli ရဲ့ baby face လေးနောက်ကွယ်က လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ သူအရင်ကကြော်ငြာပေးတဲ့ Etude House ရဲ့ Sweet Recipe Baby Choux Base ပါ။ BB Cream မလိမ်းခင် ဒီ base လေးကိုလိမ်းပေးတာက Sulli ရဲ့ skin complexion ကိုတစ်ညီတစ်ညာတည်းဖြစ်စေတယ့် လျှို့ဝှက်ချက်လို့ဆိုပါတယ်။
Kpop Idol တွေကမိတ်ကပ်တွေတင်မဟုတ်ဘဲ ဆံပင်တွေကိုလည်းအရောင်မျိုးစုံဆိုး၊ ပုံစံမျိုးစုံထားရတာကြောင့် ဆံသားတွေပျက်စီးတတ်ကြတာပုံမှန်ပါ။ ဒါကြောင့် After School နဲ့ Orange Caramel အဖွဲ့ဝင် Nana က သူ့ရဲ့ဆံပင်တွေပြန်ပြီးသန်စွမ်းလာစေဖို့ အမြဲသုံးတဲ့ Hair Care product ကတော့ Moroccanoil Treatment Light Oil လို့ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
Kpop လောကရဲ့ baddest female လို့တင်စားကြတဲ့ CL ကတော့ Maybelline Cosmetic တွေရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦးပါတဲ့။ သူ့ရဲ့ eye makeup တွေအတွက် eyeliner နှင့် mascara ကို Maybelline ကနေသုံးလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
အရင်က Spica အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Yang Jiwon ကတော့ lip tint ဆိုးရတာကြိုက်တဲ့သူပီပီ Benefit ရဲ့ Lip tint ကိုအမြဲသုံးပါတယ်။
ကဲ ပျိုလေးတွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ ဒီ idol တွေရဲ့အကြိုက်ရောတူညီကြရဲ့လား?
July 10 ရက်မှာ Bella က ထွက်တော့မယ့် ပစ္စည်းသစ်လေးက ဘာလေးလဲ?
၅မိနစ်ပဲအချိန်ပေးရုံနဲ့ ပန်းနုရောင်သန်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် Bubi Bubi Lips